Kutuka, kusvibisa uye kuchera - Law & More B.V.
Kutuka, kusvibisa uye kuchera
Kuburitsa zvaunofunga kana kushoropodza kuri musimboti kwete taboo. Nekudaro, izvi zvine zvazvinogumira. Zvinyorwa hazvifanire kunge zvisiri pamutemo. Kunyangwe chirevo chisiri pamutemo chichatongwa pamamiriro ezvinhu. Mukutonga muyero unoitwa pakati pekodzero yerusununguko rwekutaura pane rumwe rutivi uye kodzero yekuchengetedzwa kwerukudzo uye mukurumbira kune rimwe divi. Vanotuka vanhu kana vezvemabhizinesi vanogara vaine chirevo chisina kunaka. Pamwe pacho kutuka kunonzi hakusi pamutemo. Mukuita, panowanzo kutaurwa nezvemhando mbiri dzekutuka. Panogona kuve nekusvibisa uye / kana kuchera. Dzose mbiri kusvibisa uye kuchera zvinokanganisa munhu anenge akuvadzwa. Iko kuchera nekusvibisa zvinoreva chaizvo zvinotsanangurwa mune ino blog. Tichatarisawo masanctions anogona kupihwa munhu ane mhosva yekuzvidza uye / kana kuchera.
"Chero kuitisa nemaune kusiri kufukidzirwa nekusvibisa kana kuchera" kunofanirwa kuve sekutuka kuri nyore. Hunhu hwekutuka ndewekuti imhosva yekunyunyuta. Izvi zvinoreva kuti uyo ari kupomerwa anogona kutongwa kana nyakupara amhan'ara. Kutuka kunowanzo kungoonekwa sechinhu chisina kusviba, asi kana uchinyatsoziva kodzero dzako, mune dzimwe nguva unogona kuona kuti munhu akakutuka anogona kutongwa. Zvisinei, zvinowanzoitika kuti munhu anenge arwadziswa haataure kutukwa nekuti anogona kusangana nezvakaipira zvine chekuita nekuziviswa kwenyaya.
Kana iri nyaya yekurova nemaune kukudzwa kana zita rakanaka, nechinangwa chekuzvizivisa, ipapo munhu iyeye ane mhosva yekusvibisa zita. Kurwisa nemaune zvinoreva kuti zita remumwe munhu rakaiswa nemaune zvakaipa. Nekurova nemaune, paramende zvinoreva kuti unorangwa kana ukataura zvakaipa nemaune nezvemunhu, boka kana sangano, nechinangwa chekuzvizivisa. Kusvibisa kunogona kuitika nemazwi pamwe nekunyora. Kana zvikaitika zvichinyorwa, zvinokodzera seyekunyomba. Zvinangwa zvekusvibisa kazhinji kutsiva kana kushungurudzika. Chinhu chakanakira munhu arohwa ndechekuti kusvibiswa kwakaitwa kuri nyore kuratidza kana kuri kwekunyora.
Kutuka kunotaurwa kana munhu achinyengerwa nemaune nekutaura pachena, kwaanenge achiziva kana kwaanofanira kuziva kuti zvirevo zvacho hazvibve pachokwadi. Naizvozvo kuchera kunogona kuoneka kupomera mumwe munhu nhema.
Kupomedzerwa kunofanira kuvakirwa pazvinhu
Mubvunzo wakakosha uri kutariswa mukuita ndewekuti, uye kana zvichisvika sei, kupomerwa kwacho kwakawana tsigiro muzvokwadi yaive iripo panguva yezvirevo. Mutongi saka anotarisa kumashure kune mamiriro akange akaita panguva yaive yakarehwa zvirevo mumubvunzo. Kana zvimwe zvirevo zvichiratidza kunge zvisiri pamutemo kumutongi, achatonga kuti munhu akataura izvozvo ane mhosva yekukuvara kunotevera. Kazhinji, munhu akabatwa anokodzera kubhadharwa. Muchiitiko chekutaura kusiri pamutemo, munhu akabatwa anogona kukumbira kudzorerwa nerubatsiro rwegweta. Kutsiurwa zvinoreva kuti kuburitsa zvisiri pamutemo kana chirevo chakagadzirwazve. Muchidimbu, kudzokorodza kunotaura kuti meseji yapfuura yakanga isiriyo kana isina chokwadi.
Maitiro ehurumende uye matsotsi
Pane kutuka, kusvibisa kana kuchera, munhu akabatwa ane mukana wekuti apfuure nechero mhosva uye mhosva. Kubudikidza nemutemo wehurumende, anenge abatwa anogona kukumbira muripo kana kudzoreredzwa. Nekuda kwekuti kusvibiswa uye kuchera zvakare imhosva, munhu anenge akuvadzwa anogona zvakare kuvazivisa nekudaira kuti iye anenge achipara mhosva aendeswe kumatare.
Kutuka, kusvibisa uye kuchera: chii chinonzi masanctions?
Kutuka kuri nyore kunogona kurangwa. Chimiro cheizvi ndechekuti munhu anenge abatwa anofanira kunge akaita mushumo uye iyo Public Prosecution Service inofanira kunge yafunga kupomedzera munhu mhosva. Mutongo wakakwira uyo mutongi anogona kumisikidza mwedzi mitatu kusungwa kana faindi yerudzi rwechipiri (€ 4,100). Kuwanda kweiyo faindi kana (kusungwa) chirango kunoenderana nehukuru hwekutuka. Semuenzaniso, kutuka kwakasarura kunorangwa zvakanyanya.
Kusvibiswa zvakare kurangwa. Pano zvakare, anenge akuvadzwa anofanira kunge akaita mushumo uye iyo Public Prosecution Service inofanira kunge yakafunga kupomhodza vanopomerwa. Kana pakasvibiswa mutongi anogona kumanikidza kuvharirwa kwemwedzi mitanhatu kana faindi yechitatu chikamu (€ 8,200). Sezvinei nenyaya yekutuka, iko kukomba kwemhosva kunoonekwawo pano. Semuenzaniso, kusvibiswa kunoratidzira mushandi wehurumende kunorangwa zvakanyanya.
Panyaya yekuchera, zvirango zvinogona kuiswa zvinorema zvakanyanya. Panyaya yekunyomba, dare rinogona kumisikidza huwandu hwakanyanya hwekusungwa kwemakore maviri kana faindi yerudzi rwechina (€ 20,500). Panyaya yekuchera, panogona kuve zvakare nekutaura kwenhema, nepo kuziviswa kwacho kuchiziva kuti mhosva haina kuitwa. Mukuita, izvi zvinonzi sechipomerwa kukwirira. Mhosva dzakadai dzinowanzoitika mumamiriro ezvinhu apo mumwe munhu anoti akarohwa kana kushungurudzwa, uku handizvo.
Kuedzwa kusvibiswa uye / kana kuchera
Kuedza kusvibisa uye / kana kuchera kunorangwa. Na 'kuyedza' kunorehwa kuti kuyedzwa kwakaitwa kuita kusvibisa kana kuchera mumwe munhu, asi izvi zvakakundikana. Chinodikanwa cheichi ndechekuti panofanirwa kuve nekutanga kwemhosva. Kana kutanga kwakadaro kusati kwaitwa, hapana chirango. Izvi zvinoshandawo panotangwa, asi mutadzi anozvisarudzira ega kuti asaita kuchera kana kusvibisa mushure mezvose.
Kana mumwe munhu akarangwa nekuda kwekuyedza kusvibisa kana kuchera, chirango chikuru che 2/3 chechirango chakapfuura chemhosva chakazadziswa chinoshanda. Panyaya yekuyedza kusvibiswa, ichi ndicho chirevo chakanyanya chemwedzi mina. Panyaya yekuedza kuchera, izvi zvinoreva murango wakakura wegore nemwedzi mina.
Unofanirwa kubata nekutuka, kusvibisa kana kunyomba? Uye iwe unoda rumwe ruzivo nezve kodzero dzako? Wobva usazeza kuonana Law & More magweta. Tinogona zvakare kukubatsira iwe kana uri kupomedzerwa nePublic Prosecution Service pachako. Nyanzvi yedu uye nyanzvi dzemagweta akasarudzika mumunda wezvemitemo yematsotsi achafara kukupa zano uye kukubatsira mukutongwa kwemutemo.
Next Kuchenjera kudzingwa »
pashure «Kudzingwa kwemba yerendi